Ku dhawaaqistii liiska xulka kubada cagta Puntland oo dib uu ku yimid | puntlandi.com
Ku dhawaaqistii liiska xulka kubada cagta Puntland oo dib uu ku yimid
Xidhiidhka kubada cagta Puntland iyo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda Puntland, ayaa dib u dhigay illaa iyo maalinta sabtida soo socota, shaacinta liiska xulka kubada cagta Puntland, oo maanta lagu waday in maanta lagu dhawaaqo.
Tababaraha xulka kubada cagta Puntland, Maxamed Ciiro, ayaa sidaas warbaahinta u xaqiijiyay.
Arrimo farsamo awgeed ayaa keentay dib u dhaca shaacinta liiska ciyaartoyda Puntland u matalaya tartanka kubada cagta ee dowlad goboleedyada Soomaaliya, kaasoo dhawaan ka furmaya Kismaayo, kadib codsi ka yimid wasiirka ciyaaraha Puntland Cabdiraxmaan Axmed Cabdulle.
Warbaahinta gudaha ayaa isku diyaarinayay inay tagaan xafiiska xidhiidhka kubada cagta Puntland ee magaalada Garowe, halkaas oo lagu waday in looga dhawaaqo xulka Puntland, balse arrimo la xidhiidha xaga qaban qaabada xaraynta ciyaartoyda ayaa sababay dib u dhaca.
Xubno katirsan xidhiidka kubada cagta ayaa warsidaha Puntlandi u xaqiijiyay in la dhameystiray xulashada ciyaartoyda Puntland uga qeyb gaalaya tartanka, iyadoo sida aan horey u sheegnay ay liiskaan kasoo muuqaandoonaan ciyaartoy cusub iyo kuwii hore.
Xidhiidhku waxay sheegeen inay ciyaartoyda kusoo xuleen iyadoo laga eegayay dhanka xirfada iyo inuu jir ahaan iyo caafimaad ahaan udiyaarsan yahay tartankaan, waxaana xusid mudan in ciyaartoyda laga xulayay dhammaan gobolada Puntland sida ay xubno guddiga katirsan inoo xaqiijiyeen.